संसद् सञ्चालन खर्च कति ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले वार्षिक खर्च एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ पुग्ने बताए ।
गौतमले भने , “दुवै सदनको सचिवालय खर्च र सांसदको तलब भत्तासमेत गरी एक अर्ब ७० करोड पुग्ने भएको छ । यसमा प्रदेशसभा सञ्चालनको खर्च जोडिएको छैन । ”
सचिवालयको खर्चमध्ये तलब भत्तामा सबैभन्दा बढी खर्च हुनेछ । १० करोड ५८ लाख रुपियाँ वार्षिक भवन भाडामा खर्च हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको बाँकी भाग पनि सचिवालयले उपयोग गर्ने गरी सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार सम्मेलन केन्द्रलाई सचिवालयले तिर्नुपर्ने रकम थप बढ्नेछ । रकम भने यकिन भइसकेको छैन, गोरखापत्रमा खबर छ ।
एमालेले आज पाँच जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने
फागुन १४ । काठमाडौं, नेकपा एमालेले आज पाँच जना वैकल्पिक सदस्य मनोनित गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टी मुख्यालय […]
३ महिनामा वर्षौंसम्म थला पार्ने नीतिगत निर्णय गरे शिक्षामन्त्रीले
भदाै २४, काठमाडाैं । गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको शुक्रबार तीन महिना पुग्यो । यस अवधिमा उनी […]
भक्तपुर । मिर्गौलाको उपचार एवम् प्रत्यारोपण गर्दै आएको मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा आजदेखि मुटु रोग उपचार […]
“घर ढल्यो, धर्ती फाट्यो तर मन मरेको छैन”
प्यूठान । फोप्ली–३ का भुपाल पुनले १२ वर्षदेखि देखेको सपना पूरा हुन सात दिन मात्र बाँकी थियो । “म जन्मेको दुई […]
प्रमुख ३ दलको बैठक आज बस्दै
माघ ६ । काठमाडौं, प्रमुख ३ दलको बैठक आज पनि बस्दै छ । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सहमती नजिक पुगेको भन्दै […]
शनिबार दिल्लीमा के गर्दैछन् ओली?
फागुन ८ । नयाँ दिल्ली, भारत भ्रमणको दोस्रो दिन शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतका समकक्षी नरेन्द्र […]